Ubungqina beQQ: Ubungqina be-Intanethi kunye nokuSebenza kokuSebenza ngokuZenzekelayo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 17, 2015 NgoMvulo, Meyi 4, 2015 Douglas Karr
UbungqinaHQ Isoftware esekwe kwi-SaaS ekwi-intanethi ehlaziya uphononongo kunye nokuvunywa komxholo kunye neeasethi zoyilo ukwenzela ukuba iiprojekthi zentengiso zigqitywe ngokukhawuleza kwaye kungabikho mzamo mncinci. Ingena endaweni ye-imeyile kunye neenkqubo ezikhutshelweyo, inika amaqela amaqela izixhobo zokuphinda zijongane nomxholo wokuyila, kunye nabaphathi beprojekthi izixhobo zokulandela umkhondo wovavanyo oluqhubekayo. Ubungqina be-HQ bunokusetyenziswa kuyo yonke imithombo yeendaba kubandakanya ukuprinta, okwidijithali kunye nokulalelwayo / ukubonwa.
Ngokwesiqhelo, ii-asethi zoyilo ziyajongwa kwaye zamkelwe kusetyenziswa ii-imeyile, ubungqina obukhuni, ukwabelana ngescreen kunye nenani lezinye iinkqubo ezingasebenziyo. UbungqinaHQ isombulula le ngxaki ngokubonelela ngesisombululo esisekwe lilifu kumaqela entengiso ukuba angaphononongi kuphela, ahlele kwaye asebenzisane kwii-asethi zoyilo kodwa nokuba nabantu abafanelekileyo kunye namaqela avume iasethi nganye ngaphambi kokudlulela kwinqanaba elilandelayo, yiyo le ProofHQ eyahlukileyo ukuhambahamba komsebenzi ayenayo.
Ulawulo lokuhamba komsebenzi: Uphengululo olwenziwe ngokufanelekileyo kunye novavanyo oluzenzekelayo kunye nokuvunywa kokuhamba komsebenzi kwiiasethi zakho zoyilo kubalulekile ekuqinisekiseni ukuba iiprojekthi zentengiso kunye nezinye izinto ezenziwayo zigqitywa ngexesha. Nokuba uyiarhente esebenza ngeendlela ezahlukeneyo zomthengi ngamnye okanye uphawu oluhlangabezana nokudibana okungaphakathi kunye nemicimbi yokuthotyelwa, uya kuhlala uchitha ixesha kwizinto eziyimfuneko ngaphandle komnye. Ngokuhamba ngokuzenzekelayo, abalawuli beeprojekthi, abaphathi beeprojekthi okanye abathengisi abalawula iqela banokubeka uphononongo oluphindaphindiweyo kunye nemisebenzi yokuvunywa kwi-autopilot, ikuvumela ukuba ugxile ekwenzeni eyona nto uyenzayo: ukuba nemveliso ngakumbi kunye nokudala ngakumbi.
Iimpawu eziphambili zeProHHQ
Uphengululo olulula kunye nenkqubo yokwamkelwa
Ixesha langempela, ukunika izimvo okunomdla kunye nezixhobo zokuphawula
Yenza ubungqina obuvela kwiifayile ezingama-150 +
Umdibaniso noLawulo lweProjekthi kunye nezixhobo ze-DAM ezinje nge-BaseCamp, Central Desktop, CtrlReviewHQ, Adobe Creative Suite, Microsoft Sharepoint, Xinet, Box, Widen and Workfront
Ukuphonononga ubungqina kwi-PC, i-MAC, i-smartphone okanye ithebhulethi
Thelekisa ngokuzenzekelayo iinguqulelo ezininzi
Yabelana ngokukhawuleza ngobungqina kunye namaqela okuhlaziya asasaziweyo
Landa ubungqina ngokuchasene nexesha elibekiweyo
Ukuhamba komsebenzi ngokuzenzekelayo
Ukulawulwa kobungqina obuphambili
Umzila wophicotho-zincwadi wexesha
tags: Indawo yokuyila yeAdobeNkonzoizixhobo zearhenteimvumeBasecampIbhokisiDesktop EphakathiIntsebenziswanoCtrlReviewHQuyiloMicrosoft Sharepointonline ubungqinaUbungqinaubungqinaubungqinaiqelayandisaXinet
Awuthethi ngeeGigs ngenxa yoBukho bakho kwi-Intanethi
Juni 24, 2013 ngo-7: 04 PM
I-ProofHQ sisiqalo esihle, kodwa kubathengi abaphucukileyo, nceda ujonge kwiViki Solutions. Nge-2400% ye-zoom enzulu, ukuchaneka kombala, ukuthelekisa ukuhlaziya, ukupakisha iimpawu ezithile, kunye nobuchwepheshe bokukhawuleza, ukuhanjiswa kwefayile ekhuselekileyo kunye nokwabelana ngehlabathi jikelele, iViki Solutions iyanelisa iimfuno zee-arhente ezinkulu zokulawula uphawu emhlabeni jikelele. Singathanda ukuba yinxalenye yenqaku lakho nawe! Ndiyazi ukuba esi sisithuba senkampani, kodwa ndizama ukunceda abafundi bakho ukuba bafumane le nto bayifunayo.
Jul 6, 2013 ngo-5: 15 AM
Sisebenzisa iProofhub (www.proofhub.com) kwaye sifumene isixhobo sokuqinisekisa kunye neprojekthi kunye neetemplates zoluhlu lwemisebenzi engcono kune-basecamp's proofhq. Iqela labayili liyaphendula kwaye limamele abathengi babo, ibiyinto enkulu kuthi.
Jan 23, 2014 kwi-8: 09 AM
I-ProofHQ lukhetho oluhle kodwa ndiyayithanda iProofHub ngakumbi kuba inamandla kakhulu kwaye ilula kwaye ineempawu ezininzi.